Ahoana no hikarakarana akoho any amin'ny lohasaha Stardew? - Lalao
inona no hatao raha tsy mandeha ny telefaoniko
nofinofy momba ny fitsapana ny fitondrana vohoka tsara
iphone 7 miampanga fa tsy mandeha ny headphone
mifandray amin'ny wifi fa tsy misy iphone Internet
Ahoana no hikarakarana akoho any amin'ny lohasaha Stardew?
Trano fananganana sy fanangonana biby ao Lohasahan'i Stardew mety ho orinasa lafo vidy sy mandoa hetra. Tsy ny rehetra no te-hiompy biby, fa ho an'ireo izay manao izany dia misy torolàlana fanombohana amin'ny fifidianana azo hanampiana ireo vao manomboka ny rafitra fambolena ilaina amin'ny fiompiana biby, ao anatin'izany ny tranom-borona.
YouTuber Biffa manana torolàlana fohy momba ny zavatra tsy maintsy angoninao sy izay ilainao amin'ny lisitra mba hananana tranon'akoho ao amin'ny toeram-piompianao. Misy horonan-tsary 20 minitra etsy ambany mampiseho fampahalalana mahasoa sasany momba ny fandaminana indray ny toeram-piompiana sy ny fomba sy ny toerana mety handinihana ny tranon'akoho eto ambany. Azonao atao ny manamarina azy eto ambany.
Raha te-hanamboatra tranon'akoho aho dia tsy maintsy mahazo hazo 100, 300 ary mila volamena 4000 $. Tsy maintsy mandeha any amin'i Robin any an-tanàna izy mba hampanamboatra tranon'akoho. Ianao dia tsy maintsy maka antoka fa ampy ny toerana noforonina mba hanana toerana ho an'ny kaoperativa.
Azonao fefy ao anaty tranon'akoho mba handosirana ireo akohovavy manana azy ireo izay mihinana ahitra. Hamarino fotsiny fa manamboatra fefy ampy ianao raha tianao hanana toerana hihetsika ny akoho.
Misy horonantsary faharoa avy amin'i YouTubero AdamBomb izay manazava sy mampiseho ny fomba hamenoana ny tranon'akoho rehefa avy namboarin'i Robin.
Tsy maintsy mody izy hividy ny ombin'i Marnie. Ny akoho tsirairay dia mitentina 800 volamena. Raha manam-bola ampy ianao dia afaka mividy akoho amam-borona amin'ny kaoperativa. Azonao atao koa ny manome anarana ny akoho.
Tsy maintsy mividy ahitra ianao hamelomana ny akoho ary atody isan'andro ny atody, izay azo hanina na amidy. Mba hamahanana ny akoho dia mila manamboatra silo mba hamahana ny akoho.
Mba hananganana ny silo dia mila volamena, vato 100, tanimanga 10 ary bara varahina 5 ianao. Mila toerana malalaka sivy ianao hananganana ny silo. Robin dia hanamboatra ny silo ho anao toy ny amin'ny tranon'akoho.
Raha vantany vao vita ny fanaovana silo i Robin dia azony atao ny mitazona azy feno mololo sy ahitra amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo fitaovana ary mankany amin'ny silo ary apetrany ao anatiny. Azonao atao ny mahita ny fomba famenoana ny silo amin'ny fampiasana azy io mba hanomezana sakafo ireo biby amin'ilay horonantsary etsy ambany YouTuber Carlos Huang .
Izany dia tokony hanampy amin'ny fikojakojana ny biby omena sakafo ary manampy ny akoho hitombo mba hahafahany mamokatra atody tsy tapaka.
Aorian'ny fihazonana ny akoho amam-borona sy ny silo feno ahitra, dia afaka mitombo sy tsara tarehy ireo akoho.
Lohasahan'i Stardew Azo alaina bebe kokoa izao PC amin'ny Steam ho an'ny $ 14,99. Araka ny PC Gamer, olona maherin'ny 425.000 no efa nividy kopian'ny lalao, manaporofo fa ny mpilalao sasany dia tena tao anaty toe-po mihitsy a Volana fijinjana fomba klone.